Fikirka naqshadaynta ee 24 ee ugu fiican XNUMX Ragga iyo haweenka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Fikradda naqshadaynta jimicsiga 24 ee ugu wanaagsan ee ragga iyo dumarka
Dunida ugu fiican, tattoos qabaailku wuxuu noqon karaa oo kaliya wakiil dhab ah oo ah waxa aan aaminsanahay. Inkasta oo aynaan ku noolnahay adduun dhamaystiran, isticmaalka shaatiqada qabiilku waxay noqdeen waxa kuu sheegi kara sheeko ku saabsan waxa aad run ahaantii aaminsan tahay. Tani waa sheekada in badan oo naga mid ah ay isku dayayaan inay sheegaan.
Tattoo Qabiilku wuxuu u taagan yahay xoog ama geesinimo si looga gudbo caqabadaha. Muxuu yahay # sifo laga helo dhaqanka ama meelaha ama xitaa maxaliga ah. Waxay bilowday maalmaha hore markii dadku ay helaan aqoonsigooda oo loo maro tattoos. Tattoo Qabiil waxaa loo isticmaalaa in laga hadlo rumaysiga diinta ama diinta. Waxaa loo isticmaalaa sidii xayiraad ama xitaa badbaadinta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sheekooyin sheegaya in qofna uusan awoodi karin inuu sheego marka laga reebo qabiilka ka soo jeeda qabiilka #tattoo. Uma baahnid inaad meel fog u guurto si aad uga dhigto duruufahaaga nolosha dadka kale. Iyada oo taatarkan, way kuu fududaaneysaa inaad dunida u sheegto sheekada adiga oo aan cod samaynin.
Tattoo qabaailku wuxuu leeyahay macnooyin badan wuxuuna muujin karaa midnimada. Wareegga ku saabsan tattoo wuxuu ka hadlayaa dhererka iyo isu-dheelitirka iyo sidoo kale daa'in, markaad eegto masaafada oo dhan ka soo jeedda xariiqda hoose ilaa dhammaan qodobada. Diin aad u badan ayaa ka faa'iideysanaya si aad u sheegto waxyaabo badan oo aamin ah. Tattoo wuxuu u taagan yahay nuxur, sharaf, naxariis, daacadnimo, daacadnimo iyo kalsoonida. Tattoo waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in laga hadlo xayawaanka, awoodda iyo khibradda. Waxaa lagu muujin karaa waxyaabo ay tahay naadir iyo mid gaar ah sida barafka, kalluunka kalluunka iyo qotada dheeriga ah si loo ilaaliyo ilaalinta, caawimada iyo geesinimada.
1. Naqshadaha Tartanka Khaaska ah ee Qabaa'ilka
2. Fikirka tattoo ee qabiilka ee ragga
3. Dharbaaxa qabiilka ee ragga iyo gacmaha
Ragga iyo haweenku waxay bilaabeen in ay isticmaalaan tattoos qabiileed si ay u kala duwanaato. # Dhejinta tattoo qabiilladaada ayaa si buuxda loo muujin karaa markaad ka hesho jidhkaaga.
4. Naqshadeynta tashuuga garabka ah ee ugu muhiimsan
Arinta la leh tattoo qaboojinta qabaa'ilka ayaa ah in ay u tahay meel aad u fiican inaadan jeclayn. Markaad diyaar u tahay inaad ku sii socotid heerka nolosha ee ku xigta meesha aad diyaar u tahay inaad ku sahamiso farshaxanka jirka, tattoo tani waa adiga.
5. Naqshadda casriga qaboobaha qabatinka loogu talagalay ragga
6. Fikradda naqshadda qaboojinta ee qabaailka qaboojinta ee wiilasha
Kala badhkeena waxa ay raadineysaa siyaabaha lagu helo tattoo oo isbeddel ku sameyn lahaa marka ay dadku arkaan iyo taatuuga garabka ee garabka ayaa noqon kara xalka.
7. Tattoo qabiileed qabiilka fudud oo loogu talagalay guys
8. Fikradda qaboojinta ee qaboojinta qabaa'ilka ee haweenka
Tattooist wanaagsan ayaa kaa caawin kara inaad sawir qaaddo tattoo qabiileedka haweenka. Naqshaduhu waa wax aad u baahan tahay inaad ka wada hadashid tattooistahaaga si aad ugu suurtogasho inuu qofku u lahaado wax aad u baahan tahay.
9. Tartanka qabiilka iyo laabta ee ragga
Haddii ay dhacdo in aad aragto tattoo qabiileed aad jeceshahay qof, weydii qofka sameeyey. Eeg majaajooyinka tattoo iyo shabakada si aad u hesho jawaabaha ku saabsan tattooists kuwaas oo kaa caawin kara sawirka.
10. Sidee fikrada naqshadeynta ee qaboojinta qabaa'ilka ee gabdhaha
Qaadashada tattoo qabiillada waxay kaliya kaa caawin kartaa inaad hesho saameynta la rabo ee aad u baahan tahay tattoo. Markaad hesho tattooist oo aad ka heshay studios, waxaad fursad u siisaa inaad soo booqato oo aad aragto studios iyo portfolios. Nidaamka taatuuga ah ee qabaa'ilka ayaa markaa lagaa qaadi karaa.
11. Dharbaaxa qabiilka ragga
12. Quruxda quruxda qabaa'ilka ee ragga
13. Tattoo qabaa'ilka garabka ee guys
14. Qabaa'il khaas ah oo tayo-qabasho ah oo buuxda oo loogu talagalay gabdhaha
Iyada oo ay muhiim u tahay muhiimada koowaad, haweenku waxay bilaabeen inay jecel yihiin tattoo qabaa'ilka oo lagu sawirayo bowdada oo dhan. Dabcan, waxaad u sheegi kartaa in taatuubka qabaa'ilka ee gabadhu ay noqon karto mid jinsi ah isla mar ahaantaana ay dhaafi karaan macluumaadka ay u baahan tahay inay ka gudubto.
15. Naqshadda laysku qurxiyo ee haweenka
16. Naqshad jilbaha garabka oo loogu talagalay haweenka
17. Qabiil qaboojiye dib loo habeeyo oo loogu talagalay ragga
Diyaargarowga, cabirka, iyo qulqulka, ayaa ugu muhiimsan marka ay timaado tattoo qabaa'ilka. Tilmaamo qabiileed oo ballaadhan ayaa loo diyaarin karaa si qofkasta uu u fahmi karo waxa uu ka hadlayo iyo waxa aad rabto inaad ku guulaysato.
18. Garabka qabaa'ilka ee jilicsan ee la jecel yahay ee fikradda naqshadeynta wiilasha
Maskaxda ku hay in ay jiraan naqshado faro badan oo ku saabsan tattoos qabaa'ilka ayaga oo aan ku dhigno kuwa aan ku tusineyno. Tilmaame-yaasha qabaa'ilka waxaa lagu sawiraa siyaabo kala duwan taas oo ah sababta ay tahay inaad u hesho habka aad u habeysan tahay.
19. Mucaaradka qabaa'ilka iyo qaboojinta dib u habeynta loogu talagalay guys
20. Naqshad jilbaha garabka ah oo loogu talagalay gabdhaha
21. Qabiilka dib u habeynta tattoo ragga
22. Fikradda naqshadda qaboojinta qabaa'ilka ee qaboojinta haweenka
23. Fikradda naqshadda qabaa'ilka ee garabka ee loogu talagalay Guys
24. Naqshadeynta tiknoolajiyada loogu talagalay garabka ragga
tattoos gacantatattoos ubaxTilmaamta jaalaha ahtattoos qorraxdacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahgadaal u laabotattoos taajkiitattoo maroodiganaqshadeynta mehndisawirada malaa'igtatattoo biyo ahTattoos Wadnahasawir gacmeedtattoos sleevewaxaa la dhajiyay tattoosTattoo Feathertattoos eaglelaabto laabtajimicsiga bisadahasawirrada raggatattoo ah octopusDhaqdhaqaaqaarrow Tattootattoo indhahatattoo tilmaantattoos saaxiib saxa ahhenna tattoolammaanahasawirada gabdhahatattooskoi kalluunkatattoos qabaa'ilkashimbir shimbirtaraagada kubbaddatattoos iskutallaabtafikradaha tattootattoos qoortaTartoo ubax badantattoo dheemanku dhaji tattoosJoomatari Tattoostattoos moongaraacista gacmahalibto libaaxtattoos qosol lehTattoo infinitytattoos cagtawaxay jecel yihiin tattoosshaatiinka shiidanmuusikada muusikada